IPhoneka cusub ee 11 Pro wuxuu qarinaya 2 GB oo RAM dheeri ah oo loogu talagalay kamaradaha cusub | Wararka IPhone
IPhone cusub 11 Pro wuxuu qariyaa 2 GB oo RAM dheeri ah oo loogu talagalay kamaradaha cusub
Maalintii weyneyd ayaa timid, inbadan oo idinka kamid ah ayaa nasiib uhelay in mid kamid ah aaladaha cusub ay kahelaan raga kujira guriga, iPhone-ka cusub. iPhone 11 oo u yimid inuu kacdoono adduunka kaamirooyinka casriga ah ... Waxayna umuuqataa inaan sii wadayno inaan layaab ku qaadanno iPhone-ka cusub ee 11 11 Pro iyo kaamirooyinkiisa. Sida muuqata, iPhone 4 Pro cusub oo leh XNUMX GB oo RAM ah waxay lahaan laheyd 2 GB oo dheeri ah oo xasuusta RAM ah oo kaliya maareynta kamarada iyo muuqaalada cusub ee sawir qaadista ah ee ay leedahay. Boodka kadib waxaan ku siineynaa dhammaan faahfaahinta helitaankan muhiimka ah ...
Waxaa daahfuray horumariye Steve Troughton-Smith, oo ku mahadiyey quusitaanka Xcode cusub waxaad ogaan laheyd in iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max cusub ay muujinayaan natiijooyin RAM kala duwan, natiijooyin mararka qaarkood ahaa 4 GB iyo jeer kale waxay ahayd 6 GB.
Dhowr qof ayaa ila taliyay inay jiri karto 2GB dheeraad ah oo RAM ah oo loogu talagalay kamaradaha. Waxay umuuqataa in dhamaan sawiradan cusub ee leh Deep Fusion aysan aheyn kuwo rakhiis ah. Ma haysto waddo aan ku xaqiijin karo faahfaahintaan xilligan, mana u muuqan doonto adeegsadaha si kasta.
Hal suurtagal, taas oo ah 2 GB dheeraad ah, taas oo aakhirka macno u leh dhammaan qaababka cusub ee Apple ay na siiso ee la xiriira kamaradaha. ka duubista isku mar ee dhamaan 3da kamaradood waxay ubaahantahay RAM noocaas ah, haddii kale suurtagal ma noqon lahayd. Waa isku mid hadaan ka hadalno habka habeenka cusub, ama mustaqbalka Fusion Deep oo si weyn u wanaajin doonta qeexitaanka sawiradayada mahadsanid barashada mashiinka. Waligood kama dhihi doonaan Cupertino, laakiin waad ogtahay, isla marka ay bilaabaan inay la shaashadaan iphone-ka oo ay xitaa kala furfuraan, waxaan awoodi doonnaa inaan ogaanno wax kasta oo qalabkan cusub ee Apple qariyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 11 » IPhone cusub 11 Pro wuxuu qariyaa 2 GB oo RAM dheeri ah oo loogu talagalay kamaradaha cusub
O2 eSIM sidoo kale loogu talagalay Apple Watch
CARROT Cimilada ayaa barnaamij u soo bandhigtay watchOS 6 waxayna heshaa warka ku saabsan iOS 13